७ प्रकारका हुन्छन् श्रीमती, तपाई कस्ती या तपाईकी श्रीमती कुन प्रकारकी ? एक चोटी अबस्य पढनुहोला । | सुदुरपश्चिम खबर
७ प्रकारका हुन्छन् श्रीमती, तपाई कस्ती या तपाईकी श्रीमती कुन प्रकारकी ? एक चोटी अबस्य पढनुहोला ।
विभिन्न अध्ययन, अनुशन्धान र विश्लेषणले मात्र हैन धार्मिक ग्रन्थ र धार्मिक चिन्तनबाट श्रीमतीका अनेक प्रकार छुट्याईएको छ । यसले काम ब्यवहार गर्न सजिलो बनेको छ । त्यसो भए के तपाईलाई थाहा छ त श्रीमती कति प्रकारका हुन्छन् । वा तपाईकी श्रीमती वा तपाईकी हुनेवाला श्रीमती चै कुन वर्गमा पर्न सक्छिन् । अहिले नै जान्नुभयो भने सजिलो हुनेछ ।
श्रीमतीका बारेमा बौद्ध ग्रन्थमा एउटा रमाइलो वर्णन भेटिएको छ । जहाँ श्रीमतीलाई ७ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्रीमतीहरूको बारेमा बयान गरेका हुन् । कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो । त्यस कालमा अनाथपिण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए । उनी आफै, उनका छोरा र दुई छोरी साह्रै धर्मात्मा थिए ।
उनले आफ्ना छोराको बिहे सुजाता नामकी एक युवती सँग गरिदिएका थिए । सुजाताको स्वभाव भने विपरीत । एक पटक भगवान अनाथ पिण्डिकको घरमा जाँदा कोलाहल मच्चिरहेको रहेछ । कारण सोध्दा अनाथपिण्डिकले भगवानलाई सबै बताइदिए । त्यसपछि भगवानले सुजातालाई बोलाई सात प्रकारका श्रीमती बारे उपदेश दिएका रहेछन् ।
१, बधक श्रीमती : जो स्त्री आफ्ना श्रीमान प्रति द्वेष भाव राख्छे, अहित चिन्तन गर्छे, प’रपु’रुषप्रति आ’शक्त भएर श्रीमानको अपमान गर्छे, श्रीमानको धनका लागि श्रीमानको ब’ध गराउन पनि पछि पर्दैन, त्यस्ती पत्नी ब’धक पत्नी हुन्। यस्तो दु’शील स्त्री म’रणपछि नर’क जान्छे।
२, चोरीसम (चोर) श्रीमती : श्रीमानले कमाएर दिएको धन मध्ये केही अंश लु’काउने श्रीमतीलाई चोरीसम श्रीमती भनिन्छ । यस्ती स्त्री पनि म’रणपछि नरक जान्छे।
३, भगिनीसम (बहिनी जस्ती) : श्रीमती श्रीमानको सम्मान गर्ने, लज्जालु र पतिले भनेको मान्ने हुन्छे। यस्ती स्त्री पनि मरणपछि स्वर्गलोकमा जान्छे।
४, मातुसम (आमा जस्ती) : श्रीमती आमाले छोरोको हित चाहे जस्तै सँधै श्रीमानको हित चाहने हुन्छे । प्राप्त धनलाई राम्रोसित सम्हालेर राख्छे । यस्ती श्रीमती सदाचार युक्त भएकीले मरणपछि स्वर्णलोकमा गएर सुख भोग गर्छे।
५, आयासम (स्वामिनी) श्रीमती : केही काम नगर्ने, अल्छी, धेरै खाने, कठोर वचन बोल्ने, नोकरचाकरलाई अपमान गर्ने।
६, सखीभरिया (साथी जस्ती) श्रीमती : श्रीमान देखेर प्रसन्न हुने, आफ्नो कुल परम्परा कायम गर्ने, शीलवती तथा पतिव्रता हुन्छे । यस्ती स्त्री पनि मरणपछि स्वर्गलोकमा जान्छे।
७, दासीसम (दासी जस्ती) श्रीमती : कहिल्यै नरिसाउने, शान्त स्वभावकी, दण्ड देखेर डराउने, श्रीमानको कुरा मान्ने, सहनशील हुन्छे । यस्ती स्त्री पनि मरणपछि स्वर्गलोकमा जान्छे ।
सात प्रकारका श्रीमतीहरुको वर्णनपछि भगवानले सुजातासित सोधे, सुजाता, लोकमा यी सात प्रकारका श्रीमतीहरु छन् । यी मध्ये तिमी आफूलाई कुन प्रकारकी श्रीमती मान्छौ । ल अब तपाई पनि भन्नुस्, तपाई महिला हुनुहुन्छ भने तपाई कस्ती श्रीमती ? तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईकी श्रीमती कस्ती ? यसलाई सेयर गरेर साथीहरुलाई सोध्नुहोस् महिला भए तिमी कस्ती श्रीमती वा पुरुष भए तपाइकी कस्ती श्रीमती । ( frommandu.com बाट साभार )